प्रधानमन्त्रिलाई चुनौती डा. केसी भन्छन माईति घर मण्डलाबाट लड्छु , – Ranga Darpan
प्रधानमन्त्रिलाई चुनौती डा. केसी भन्छन माईति घर मण्डलाबाट लड्छु ,
असार २ काठमाडौं – सरकार विरुद्द अनसन बसीराख्ने डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दियका छन्। माईतिघर मण्डलामा टेप लगाएर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक लगायपनी तेस्को विरोध गर्दै डा. केसीले शनिबार प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मुखमा टेप लगाएर माइतीघर चोकमा उभिएका डा. केसीले एउटा हातमा ‘नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न दिदैनौं । निषेधित क्षेत्र घोषणा अवज्ञा गर्छौं’ र अर्को हातमा ‘म रैती होइन, नागरिक हुँ’ भन्ने प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
आफूहरुको आन्दोलनको बलमा लोकमान सिंह कार्की, गोपाल पराजुलीहरु ढलेको तर, उनीहरु त पात्र मात्र भएको बताए । मुख्य पात्र दलका नेताहरु भएको उनको दाबी छ ।
डा. केसीले भ्रष्टाचार, वेथितीविरुद्ध आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको बताए । तर, सरकारले नागरिकको मुख थुन्न माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको भन्दै डा. केसीले भने,। म ओलीजीलाई भन्छु, हामी आवाज बुलन्द गर्छौं, । यहीबाट लड्छौं कसरी रोक्दा रहेछौं हेरौं । उनले पटक पटक सरकार विरुद्द अनसन बस्दै आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। तर सरकारले यसको विरुद्दमा कुनै चासो नादेखायको देखिन्छ ।
रङ्ग दर्पण 7577 posts0comments
पोर्चुगल समर्थक पशुपति मन्दिर सरसफाई गर्दै ,,
अर्जेन्टिना र आइसल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै
पवन र खुइली डेटिङमा मस्त,भाईरल भिडियो
आज १९ जनाको मृ,त्यु,नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने मानिसको संख्या १४५४ पुग्यो
जाजरकोटमा नेपालि कांग्रेसलाई झट्का आशा लाग्दा युवा नेता रावल नेकपामा प्रवेश ,
८५ वर्षीया वृद्धामाथि पनि घरेलु हिंसा
काठमाडौँ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा हाँस्यशृखलाहरुको निर्माण हुनेक्रम बढ्दो छ । कोरोना कहरको समयमा पनि जसमध्येको एक हो नेपाल…
आज १९ जनाको मृ,त्यु,नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने मानिसको संख्या…
जाजरकोटमा नेपालि कांग्रेसलाई झट्का आशा लाग्दा युवा नेता रावल नेकपामा…
बहु चर्चित सर्जकको एकै ठाऊमा जम्काभेट पछि पछ्यौरी सप्को ,
साना किसान सहकारीको पाचौं साधारणसभा सम्पन्न ,